प्रथाका प्रताडना- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ६, २०७५ पविता मुडभरी
काठमाडौँ — सामाजिक सम्मान, लैंगिक समानता र शारीरिक सौन्दर्य खोस्ने विधवा प्रथाविरुद्ध पुरुष वर्गको कटिबद्धता चाहिएको छ ।
केही दिनअघि ४० वर्ष नकटेका देवरको निधन भयो । देवरका छोरा काजकिरियामा बसेका थिए । महिनावारी भएकी देवरकी श्रीमतीले विधवा भेषमा काजकिरिया नगरे पनि हुन्छ कि भनेर मैले जिज्ञासा राखेकी थिएँ । कुरा राखिनसक्दै खप्की खानुपर्‍यो । संस्कार विरुद्ध बोल्ने हिम्मत नगर्न चेतावनी पनि पाएँ । यो संघीय राजधानीकै घटना हो । शोकमय माहोल र कठोरपितवादी संस्कार ख्याल गरेर मैले बहस गरिन । मनमा भने विद्रोहको आगो दन्किरह्यो ।
हाम्रो समाजमा मृत्यु संस्कार र काजकिरियामा सामेल हुन छोरीलाई बन्देज छ । तर महिलालाई बाध्यता । पतिको मृत्युपछि महिलालाई टीका–सिन्दूर पुछिदिँदै र चुरापोते चुँडाल्दै सेता वस्त्र पहिर्‍याएर विधवाको ट्याग झुन्ड्याइन्छ । चलिआएको चलन हो, आइमाई भएपछि लोग्ने मर्दा यस्ता कर्म त भोग्नैपर्छ भनी यसलाई सामान्यीकरण गर्न खोज्ने पितृसत्ता समाजमा जब्बर छ । धर्म संस्कारका नाममा चलेका प्रथाका प्रताडनामा महिला नै किन ? दाइजो, बोक्सी, विधवा, छाउपडी लगायतका अनेक प्रथाको मारमा छन्, महिला ।
महिलामाथि मानसिक हिंसा, विभेद र उत्पीडन थोपर्ने विधवा प्रथा लगायतका संस्कार लैंगिक समानताको कसीमा कत्तिको उपयुक्त ठहर्लान् ? महिलावादीले विधवा शब्दका ठाउँमा एकल महिला शब्द राखेर र कहिलेकाहीं विधवालाई भेला गरी राता वस्त्र टीका लगाइदिने गरेका छन् । राता वस्त्र अभियान शरीरलाई रंगीन वस्त्र र गहनाले सजाउनमात्र नभई विधवाका नाममा गरिने चरम विभेद र निकृष्ट व्यवहार हटाउन पनि हो ।
सामाजिक न्याय र जैविक स्वतन्त्रताको सुखानुभूति गराउन हो । सामाजिक सम्मान, लैंगिक समानता र शारीरिक सौन्दर्य खोस्ने विधवा प्रथाविरुद्ध पुरुष वर्गको ऐक्यबद्धता र कटिबद्धता चाहिएको छ । समाजमा श्रीमती मरे पनि पुरुष विधुर, एकल, असहाय र ‘अलच्छिन’ मानिँदैनन् । महिलालाई भने किन फरक व्यवहार ? महिलालाई राज्यबाट विधवा भत्ता र समाजबाट सहानुभूति होइन, समान स्वतन्त्रता र सम्मान चाहिएको छ । उनीहरूलाई सामाजिक उत्पीडन, अवहेलना र मानसिक कुण्ठाबाट उन्मुक्ति चाहिएको छ ।
विधवालाई गरिने दुव्र्यवहार र तिरस्कार लैंगिक समानताका लागि ठूलो चुनौती हो । जीवनसाथीको मृत्युसँगै महिलाले आफ्नो शारीरिक रङ तथा मानसिक उमंग सदाका लागि चितामा जलाउनुपर्ने यो कुप्रथा अन्त्य किन नगर्ने ? महिलाले कहिलेसम्म धर्म संस्कारका नाममा बन्धन र उत्पीडनको आगोमा पिल्सिरहने ? भिन्न पहिरन र व्यवहारको रेखा कोर्ने चलन अन्त्य गरिनैपर्छ ।
दुर्गा घिमिरेले केही वर्षअघि साहित्यकार तथा समाजसेवी पति जगदीश घिमिरेको मृत्युपश्चात आफ्नो नाकको फुली फुकालेर पतिको चितामा चढाउँदै चुरापोते टुटाएर सेतै वस्त्र धारण गराइएको घटनालाई ‘उनको सम्झना’ कृतिमा मार्मिक ढंगले लेखेकी छन् । श्रीमान मरेपछि उसको श्रीसम्पत्ति उपभोग गर्न हुने, उसको समेत अंश रहेका छोराछोरीको साथमा रहन हुने तर वैवाहिक संस्कारमा उसबाट प्राप्त हुने केही शृंगार सामग्री भने ऊ मरेपछि कहिल्यै प्रयोग गर्न नहुने परम्परा अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
हाम्रा जिबा, हजुरबाले जे गरे, महिलालाई त्यही संस्कारमा जकडाउने मानसिकता नाति–पनाति पुस्तामा समेत उस्तै देखिनु विडम्बना होइन र ? सती प्रथाजस्तै सोला दिने विधवा प्रथा हटाउन अब राज्य, समाज र आम महिला किन ऐक्यबद्ध नहुने ?
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७५ ०७:४९
वैशाख १२, २०७५ पविता मुडभरी
काठमाडौँ — विद्यालयमा ४–५ कक्षा अध्ययन गर्ने आठ–दस वर्षका बालबालिका प्रेमपत्रका कुरा गर्छन् । कुनै व्यक्ति आफूलाई असाध्यै मनपरेको अर्का साथीलाई निसंकोच सुनाउँछन् ।
प्रेमभाव झल्काउँदै लेखिएका कागजका टुक्रा आफ्नो झोलामा कसले हालिदिएछ भनी अत्तालिँदै केही बालिका त शिक्षक–शिक्षिकासम्म आइपुग्छन् । सानै उमेरदेखि बालबालिका बीचको लैंगिक आकर्षण र सामिप्यता बढ्दै जाँदा स्वाभाविक देखिने यौन कौतुहलताका कारण कतिपय अवस्थामा विद्यालय बाहिर तिनका क्रियाकलाप बलात्कारका घटनासम्म पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसैले बालिकाका यस्ता उजुरी, समस्यालाई शिक्षकले गम्भीर भई केलाउनु र परामर्श दिनुपर्छ, हँसिमजाकमा उडाइदिनु हुँदैन ।
बलात्कारका घटना दिनहुँजसो समाचारमा आइरहेका हुन्छन् । बलात्कार सम्बन्धी विभिन्न घटनामा बालकदेखि वृद्धसम्म तानिएका छन् । बलात्कार विरुद्ध सरकारले कानुन सुधार गर्न, दोषीलाई कठोर सजाय दिलाउन र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब अभियानकै रूपमा छोरालाई पनि परामर्श र निगरानी गर्न उत्तिकै जरुरी देखिएको छ । यो अभियान घर, समाज, विद्यालय र पाठ्य–पुस्तकमार्फत सञ्चालन गर्न सक्छौं । छोरी बेलुका अबेरसम्म घर नआउँदा कसैको गिद्धे दृष्टि छोरीमाथि पर्‍यो कि भनेर हामी चिन्ता लिन्छौं । तर राति अबेर घरभित्र पसेको छोराले कसैमाथि कुकृत्य गर्‍यो कि भनेर रत्तिभर सोच्दैनौं । यस्तो विभेदजन्य मानसिकता बदल्न जरुरी छ । धेरै बालबालिकाले डर र धम्कीका कारण यौन दुव्र्यवहारका घटना बाहिर ल्याउनसकेका हुँदैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी, अशिक्षा र अभिभावकको संरक्षण तथा निगरानी अभावमा बालिका बढी बलात्कृत हुन्छन् । सहरी क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अश्लील भिडियोको विगविगीले यौन दुव्र्यवहारमा प्रेरित गरिरहेको हुनसक्छ । बालिकालाई फकाउन, धम्क्याउन र पैसाको प्रभावमा पारी घटना सामसुम पार्न सकिने मानसिकताले यस्ता घटना बढाइरहेको हुनसक्छ ।
बलात्कृतलाई केही समय सामाजिक संघ–संस्थाले संरक्षण दिन्छन्, मिडियाले राम्रै साथ दिन्छ, कानुनले न्यायिक उपचारका लागि पहल गरिदिन्छ । तर त्यसपछिका दिन उसले कसरी बिताउने भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्न आवश्यक छ । १० वर्ष नपुग्दैकी बालिका बलात्कृत भएर संरक्षण खोज्दै सेल्टरमा बस्दाको अवस्था कस्तो होला ? शारीरिक बलात्कारबाट विक्षिप्त बालिकालाई समाजले थोपर्ने मानसिक पीडा अझ कहालीलाग्दो हुन्छ । बलात्कारबाट पीडित कतिपय बालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थामा आश्रय लिइरहेका छन् । कलिला बालबालिका सुरक्षा, संरक्षण र न्यायका लागि जोखिम मोल्दै परिवार छाडेर यस्ता संस्थामा के कसरी कुन अवस्थामा बसिरहेका होलान् !
बलात्कारको घटनापछि समाज र परिवारमा तिनको पुन:स्थापना सहज र सम्मानित रूपमा कसरी गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । बलात्कारपछि स्वास्थ परीक्षण र उपचारका लागि सहज व्यवस्थासमेत सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । मुद्दा दर्तापछि बलात्कृत व्यक्ति घरमै बस्ने कि संरक्षण स्थलमा भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै मननीय छ । आफ्नै बाबु, दाजु तथा छिमेकी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर त्यही घर–समाजमा बस्दा असुरक्षित महसुस हुने अवस्था बन्छ । बलात्कारका विषयमा सामाजिक मनोविज्ञानमा परिवर्तन अत्यावश्यक भइसकेको छ । बलात्कृतलाई इज्जत र अस्मिताको विषय उठाएर थप पीडित बनाउने सामाजिक मनोविज्ञान पनि दोषी छ । बलात्कृत भन्ने बित्तिकै उसको सारा जीवन सकियो भन्ने सामाजिक मनोवृत्ति व्याप्त छ । समाजमा बलात्कारलाई वैधता दिलाउन बलात्कारीसँगै विवाह गरिदिने अभिभावक कैयांै छन् ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । बालकबाट भएका बलात्कारका घटनालाई अपराध भन्ने कि अज्ञानतावश भुल ? बलात्कारका घटनामा १० वर्ष मुनिका बालकको संलग्न रहे कारबाही गर्ने कानुन छैन । कानुनले यस्ता बालकलाई सम्झाइ–बुझाइ अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्ने र १४ वर्ष माथिकाले बलात्कार गरे बाल सुधार गृहमा राख्न सकिने भनेको छ । बलात्कारी बालकलाई कस्तो सजाय, परामर्श र सामाजिक स्थान दिने भन्ने प्रश्न पनि मननीय छ ।